Hsinbyume စေတီတော် | မြန်မာသွားရောက်ကြည့်ရှု
အဆိုပါ Hsinbyume စေတီတော် (ထို့အပြင် Sat Taw Yar စေတီတော်သို့မဟုတ် Myatheindan စေတီတော်ဟုခေါ်တွင်), မင်းကွန်းရွာအတွက်ခရီးသွားဧည့်ချွတ်၏မြောက်ပိုင်းအဆုံးမှာကြီးမားတဲ့အဖြူရောင်စေတီတော်ဖြစ်ပါသည်.
အဆိုပါမင်းကွန်းဘဲလ်ကနေလမ်းပေါ်တက်မြောက်အချို့ 150m ဆက်လက်ဆောင်ရွက်. သင်ကသစ်ပင်များနောက်ကွယ်မှသင့်ရဲ့ဘယ်ဖက်အပေါ်ကြီးမားအဖြူစေတီတော်မြင်ရပါလိမ့်မည်.
သင်ဒီမှာကနေနှစ်ခုရွေးချယ်မှုများ. ဖြစ်စေ, သေးငယ်တဲ့အခြမ်းလမ်းသို့ထွက်ခွာသွားနှင့်တောင်ပိုင်းဝင်ပေါက်ကနေစေတီတော်ရိုက်ထည့်ဖွင့်, သို့မဟုတ်, အစားလက်ဝဲလှည့်များ၏, သင့်ရဲ့ဘယ်ဖက်အပေါ်အဓိကအရှေ့ဝင်ပေါက်မှတဆင့်အခြား 50 များအတွက်အဓိကလမ်းကိုတက်ဆက်ရိုက်ထည့်ပါ.
သင်တောင်ပိုင်းကနေထည့်လိုက်လျှင်သင်သည်သင်၏ကျောပိုးအိတ်နှငျ့သငျအရှေ့ဝင်ပေါက်မှတဆင့်ပိတ်ပြီးနိုငျသောနညျးလမျး၌သင်တို့၏ဖိနပ်ထားနိုင်ပါလိမ့်မယ်. (အဖျား – ပလတ်စတစ်စျေးဝယ်အိတ်ဖုန်ထူဖိနပ်သယ်ဆောင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်). သငျသညျဖြစ်စေတံခါးဝမှာသင့်ရဲ့ဖိနပ်စွန့်ခွာခဲ့လျှင်သင်သည်ထိုသူတို့အရပြန်လာမကုန်မှီတိုင်အောင်သူတို့ဘေးကင်းလုံခြုံပါလိမ့်မည်, ရုံသည်သင်တို့ထံကစတင်ခဲ့ရာတံခါးဝသတိရ.
Hsinbyume စေတီတော်တည်ဆောက်ခဲ့ 1816 အကြီးအကျယ်မင်းကွန်း Pathodawgi ဗိမာနျတျောတညျဆောခဲ့တဲ့တူညီသောမြန်မာဘုရင်က. ရှငျဘုရငျကိုသူ့ဇနီးကအပျနှံခဲ့, Hsinbyume အမည်ရှိ, ကလေးမွေးဖွားသေဆုံးတဲ့သူ.
ဒီအဆောက်အဦးထဲမှာတစ်ဦးမြေငလျင်၏ရလဒ်အဖြစ်အဓိကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုခံစားခဲ့ရနေတုန်း 1839 အဲဒါကိုအပြည့်အဝအတွက်ပကတိဖြစ်လေ၏ 1874 က built တဲ့အခါမှာလွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်ပွုသကဲ့သို့နေဆဲကြည့်.
ကိုမဆိုဦးတည်ချက်ကနေသင်ပထမဦးဆုံးကိုတက်မယ့်လှေကားရိုက်ထည့်ရပါလိမ့်မယ်ဘုရားထံသို့ချဉ်းကပ်7ယင်းကျယ်ပြန့်အဓိကကျန်ကြွင်းရောက်ရန်အဆင့်ဆင့်. ကျန်ကြွင်းသောအရပ်အလယ်၌သငျသညျခွငျးအားဖွငျ့တန်းဖြစ်၏အဓိကဗဟိုမျှော်စင်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်5နည်းနည်း grottos အတွက်ရုပ်ပွားတော်၏အတန်း. အဓိကကျန်ကြွင်းသောအရပ်ကနေသေးငယ်အထက်ကျန်ကြွင်းသောအရပ်ကအနားမှာပူးတွဲအရှေ့လှေကားဒါမှမဟုတ်ပွင့်လင်းတက်လှေကားများအပြင်တက်. မတ်စောက်တဲ့တောင်တက်တစ်နည်းနည်းပေမယ် handrails နှစ်ဦးစလုံးအတွင်းပိုင်းနှင့်ပြင်ပရှိပါတယ်.
အဆိုပါလှေကားထိပ်မှာဗုဒ္ဓမှသေးငယ်တဲ့နတ်ကွန်းလည်းမရှိ, သငျသညျယခုရှိသမျှသောလမ်းတဝိုက် circles သောအထက်ကျန်ကြွင်းသောအရပ်ပေါ်မှာ. တောင်ဘက်တွင်မင်းကွန်း Pathodawgi ၏ကောင်းတစ်ဦးအမြင်အပါအဝင်ကဒီမှာတက်ရာမှကြောက်စရာကောင်းတဲ့အမြင်များရှိပါတယ်.
ကိုလက်စသတ်သောအခါ, မတ်စောက်သောလှေကားဆင်း, အဲဒါကိုနည်းနည်းချောပါလိမ့်မည်ကြောင့်မိုးရွာထားလျှင်သတိထားပါ, အဆိုပါ handrails ကိုသုံးပါ.
သငျသညျကံရောက်နေတယ်ဆိုရင်သင်အထီး Bhuddist ဘုန်းကြီးများနှင့် Thilashins Hsinbyume စေတီတော်နှင့်ပတ်ပတ်လည်လှည့်လည်ခေါ်ပန်းရောင်အင်္ကျီအမျိုးသမီး novitiates အချို့ကိုမြင်စေခြင်းငှါ. သူတို့ရဲ့ monastry အနီးအနားမှာအလွန်နီးကပ်. သူတို့ကယေဘုယျအားဖြင့်အလွန်ဖော်ရွေဖြစ်ကြပြီးမကြာခဏချက်တင်ရှိသည်ဖို့ခရီးသွားဧည့်ချဉ်းကပ်နှင့်၎င်းတို့၏ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ကြလိမ့်မည်.
Hsinbyume စေတီတော်သင့်ရဲ့နောက်ဆုံးရပ်နားခဲ့လျှင်သင်မင်းကွန်းထားခဲ့ပါမတိုင်မီထို့နောက်တစ်ဦးအမြန်အရာကြွင်းသမျှအဘို့အဓိက monastry နှင့်အသက်ကြီးစောင့်ရှောက်မှုစက်ရုံအတိတ်ကူးတို့ terminal ကိုဦးတည်တောင်ကျော amble. နည်းနည်းဆိုင်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်များအများအပြားလမ်းတစ်လျှောက်ရှိပါတယ်.